Wasaaradda Caafimaadka Puntland oo Wacyi-galin ka Bilowday Garowe – Radio Daljir
Nofeembar 4, 2015 4:14 b 0
November 04, 2015 (Daljir) — Wasaaradda caafimaadka ayaa bilowday ololahaan ballaaran ee bulshada reer Puntland loogu wacyigelinayo fayadhowrka nadaafadda ayaa waxaa mudada uu socdo diiradda lagu saarayaa dhaqidda gacmaha, cabidda biyo nadiif ah iyo inaan loo kortegin meel aan suuli ahayn.
Madax kasocota wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland oo kuhowlan wacyigelintaan ayaa saaka booqasho ay ku tageen dugsiga hoose dhexe ee New Waaberi Garoowe waxa ay ardayda ka wacyigeliyeen muhiimadda ay leedahay in laga hortago xanuunada ka dhalankara faradhaq la’aanta, biyaha wasakhaysan iyo banaanka oo lagu saxaroodo.
Mudadii uu socday kulanka ardayda lagu wacyigelinayey ayaa waxaa madasha lagu soobandhigay sided tallaabo oo bulshadu ay gacmaha u dhaqayaan si ay uga badbaadaan jeermiska xanuunka sababa, waxaana ardaydu ay bilaabeen inay dabaqaan wacyigelinta.
Cabdulqaadir Maxamed Burburshe madaxa xafiiska faydhowrka iyo nadaafadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa ardayda kacodsaday in wacyigelinta lasiiyo ay gaarsiiyeen guryaha iyo xaafadaha ku xeeran, kana dhowrsanaadeen xanuunada kadhasha qodobadaasi.
Agaasimaha daryeelka caafimaadka Puntland Dr Cabdirisaaq Abshir Xirsi ayaa ardayda iyo guud ahaan bulshada ku baraarujiyey inay raaceen sideeda hab ee loodhaqo gacmaha si ay caafimaadkooda u dhowraan, isagoona ardayda kula dardaarmay inay kaalintooda qaataan.